ပြProbleနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုစကေး (PPCS) (2017) - သင်၏ ဦး နှောက်သည်သင်၏ ဦး နှောက်
အဆိုပါပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုစကေး (PPCS) (2017) ၏ဖွံ့ဖြိုးရေး
IstvánTóth-Király, Agnes Zsila, မာကုဃ Griffiths က, Zsolt Demetrovics & Gabor Orosz
စာမျက်နှာများ 1-12 | အွန်လိုင်း Published: 06 မတ်လ 2017
ယနေ့အထိမျှတိုတောင်းသောစကေးတစ်ခုကျယ်ပြသီအိုရီနောက်ခံပေါ်တွင်အခြေခံပြဿနာညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအကဲဖြတ်ရန်နိုငျသောခိုင်ခံ့သော psychometric ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူရှိနေသည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏ရည်မှန်းချက် nonproblematic နှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုခွဲခြားနိုင်သော Griffiths ကရဲ့ (2005) ခြောက်လုံး-အစိတ်အပိုင်းစွဲမော်ဒယ်ပေါ်အခြေခံပြီးအကျဉ်းစကေးသည်ပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုစကေး (PPCS), ဖွံ့ဖြိုးဖို့ပဲ။ M က; အဆိုပါ PPCS 772 ဖြေဆိုသူ (390 အမျိုးသမီး, 382 ယောက်ျား၏အွန်လိုင်းမှနမူနာကို အသုံးပြု. တီထွင်ခဲ့သည်အသက်အရွယ် = 22.56, SD က = 4.98 နှစ်) ။ ပစ္စည်းများကိုဖန်တီးခြင်းသည်ယခင်ပြproblemနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုသောကိရိယာများနှင့်ဂရစ်ဖစ်၏မော်ဒယ်တွင်အချက်များ၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များအပေါ်အခြေခံသည်။ အတိုင်းအတာကိုကောင်းမွန်စွာတည်ဆောက်ထားသည့်သီအိုရီပုံစံပေါ် အခြေခံ၍ အတည်ပြုသောအချက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု (CFA) ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာ ၁၈ ခုပါသောဒုတိယအဆင့်အချက်ဖွဲ့စည်းပုံကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ PPCS ၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးတိုင်းတာမှုလျော့ပါးသွားစေနိုင်သည်။ လက်ရှိနမူနာတွင်အသုံးပြုသူ ၃.၆% သည်အန္တရာယ်အုပ်စုတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ထိခိုက်လွယ်မှုနှင့်တိကျမှုဆိုင်ရာဆန်းစစ်ခြင်းများကို အခြေခံ၍ ပြproblemနာနှင့်ပြproနာမရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုသူများကိုခွဲခြားရန်အကောင်းဆုံးဖြတ်တောက်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ PPCS သည်ခိုင်မာသည့်သီအိုရီအရခိုင်လုံသောအချက်ပြဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုဆိုင်ရာပြometricနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုသည်အတိုင်းအတာများစွာပါဝင်သည်။
ဤစာတမ်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံမေးခွန်းလွှာကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ ကိရိယာများကိုအတည်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုမှုမေးခွန်းလွှာအပေါ်ပိုမိုမြင့်မားသောရမှတ်များသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ကိုသုတေသီများတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးကောက်နုတ်ချက်:
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘဝနှင့်အတူစိတ်ကျေနပ်မှုကိုအားနည်းစွာနဲ့အဆိုး PPCS ရမှတ်ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်
နိဒါန်း FROM မှ
ယခင်ပြproblemနာရှိသောအသုံးပြုမှုအယူအဆများနှင့်အကြေးခွံများအပေါ် အခြေခံ၍ ဘက်ပေါင်းစုံပြProbleနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုပမာဏ (PPCS) ကို Griffiths ၏စွဲအစိတ်အပိုင်းများပုံစံ (Griffiths, 2001, 2005) ၏သီအိုရီအရတီထွင်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် PPCS သည်စွဲစွဲလမ်းလမ်းမရှိသောလက်တွေ့အင်တာဗျူးမပါဘဲတစ် ဦး တည်းကိုယ်တိုင်အစီရင်ခံစာအပေါ် အခြေခံ၍ အကဲဖြတ်။ မရနိုင်သောကြောင့်ပြproblemနာအပြာစာပေရုပ်ပုံကြည့်ရှုခြင်းကိုအသုံးပြုရန်အကဲဖြတ်ရန်ထူထောင်ခဲ့သည်ကိုသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။ (Ross, Mansson, & Daneback, 2012) ။
ထို့ကြောင့်ပြproblemနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းတွင်အဓိကကျသောအချက် (၆) ချက်ပါဝင်သည်။ လူ၏ဘ ၀ တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အရေးကြီးပုံကိုရည်ညွှန်းသည်မှာ၎င်းသည်သူ၏အတွေး၊ ခံစားချက်နှင့်အပြုအမူများကိုလွှမ်းမိုးသည်။ ဒုတိယအစိတ်အပိုင်းသည်စိတ်ခံစားမှုကိုပြုပြင်ခြင်းကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်း၏အကျိုးဆက်အဖြစ်သုံးစွဲသူများမှတင်ပြသောပုဂ္ဂလိကအတွေ့အကြုံအဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။ ဤအတွေ့အကြုံသည်လိုချင်သောစိတ်ခံစားမှုအခြေအနေပေါ် မူတည်၍ နှိုးဆွခြင်းသို့မဟုတ်အနားယူခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ တတိယရှုထောင့်သည်ပြconflictနာဖြစ်ပြီး၊ ပြproblemနာများရှိသည့်သုံးစွဲသူများနှင့် ၄ င်းတို့သိသာထင်ရှားသောအခြားသူများအကြားပconflictsိပက္ခများ၊ လုပ်ငန်းခွင်သို့မဟုတ်ပညာရေးဆိုင်ရာပorိပက္ခများ (လူတစ် ဦး စီ၏အသက်ပေါ် မူတည်၍)၊ ။ စတုတ္ထမြောက်ရှုထောင့်သည်သည်းခံမှုဖြစ်သည်။ တူညီသောစိတ်ဓါတ်ပြောင်းလဲခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများရရှိရန်လှုပ်ရှားမှုပမာဏများပြားလာရန်လိုအပ်သောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရည်ညွှန်းသည်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုများတွင်အလားတူအခြားအ arousal အမူအကျင့်စွဲလမ်းဖို့, သည်းခံစိတ်များ၏အရေအတွက်နှင့်အရည်အသွေးရှုထောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါအရည်အသွေးရှုထောင့်ကိုပိုပြီးကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်အစွန်းရောက်ညစ်ညမ်းအကြောင်းအရာစားသုံးဖို့ကိုရည်ညွှန်းသော်လည်းအဆိုပါအရေအတွက်အတိုင်းအတာ, အချိန်ကျော်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကြီးထွားလာငွေပမာဏကိုရည်ညွှန်းသည်။
Zimbardo နှင့် Duncan က (2012) ၏အဆိုအရ, arousal-based အပြုအမူစှဲ၏ဤအရည်အသွေးရှုထောင့်အဆက်မပြတ်ဝတ္ထုနှင့်အံ့သြစရာအကြောင်းအရာရှာကြံရန်နှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ ညစ်ညမ်း၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ဒီသည်၎င်း၏ပိုပြီးအစွန်းရောက်မာ-Core ပုံစံများဆီသို့ပျော့-Core ညစ်ညမ်းကနေပြောင်းရွှေ့ဖို့ related နိုင်ပါသည်။
Thef ပဉ္စမရှုထောင့်သည် relapse နှင့်ဆက်စပ်နေပြီးအစောပိုင်းကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းပုံစံများကိုထပ်ခါထပ်ခါပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ရှောင်ကြဉ်ခြင်းသို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်ခြင်းပြီးနောက်လျင်မြန်စွာပြန်လည်ရောက်ရှိခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ဆsix္ဌမအချက်မှာလှုပ်ရှားမှုရပ်ဆိုင်းခြင်းသို့မဟုတ်ရုတ်တရက်လျှော့ချခြင်းခံရသည့်အခါမနှစ်မြို့ဖွယ်ခံစားချက်များနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ရုပ်သိမ်းခြင်းနှင့်သည်းခံစိတ်ကို“ မှီခိုခြင်း” (O'Brien, Volkow, & Li, 2006) ၏အကျိုးဆက်အဖြစ်များသောအားဖြင့်နားလည်သဘောပေါက်ကြသဖြင့်စွဲလမ်းမှုသည်ခေတ်သစ်စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာရောဂါဗေဒတွင်အသုံးပြုသောရောဂါလက္ခဏာများနှင့်အညီဖော်ပြထားသည့်အစိတ်အပိုင်းခြောက်ခုပါ ၀ င်သည်။ အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်း, 2013; ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့, 1992) ။ မှီခိုမှုနှင့်စွဲလမ်းမှုကိုများသောအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောအရာများအဖြစ်ရှုမြင်သောကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေနှင့်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတည်းတွင်ပါဝင်ရသောအချိန်ကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှု၏ကျေနပ်ဖွယ်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အဖြစ်မယူမှတ်နိုင်ပါ။ အချို့သောသူများသည်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုပုံမှန်ကြည့်ရှုခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်လိုအပ်ပါက၎င်းလုပ်ဆောင်မှုကိုရပ်တန့်နိုင်ပြီးဆိုးကျိုးဖြစ်စေသောဆိုးကျိုးများခံစားရသည်ဖြစ်စေ (Kor et al ။ , 2014) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုအကြိမ်နှင့်ကြာချိန်အကြားဆက်နွယ်မှုသည်အပြုသဘောဆောင်သော်လည်းအလယ်အလတ်သာဖြစ်သောကြောင့်မကြာသေးမီကသုတေသနပြုချက်ကအတည်ပြုခဲ့သည်။ (ဥပမာ - Brand et al ။ 2011; Grubbs et al ။ , 2015; Twohig, Crosby, & Cox, 2009) ။ စွဲခြင်းနှင့်ပြaticနာများအသုံးပြုခြင်းသည်တူညီသောစဉ်ဆက်တစ်လျှောက်သဘောတရားများနှင့်ထပ်တူကျနေသည်။ သို့သော်အမှန်တကယ်စွဲခြင်း၏လက်တွေ့သက်သေအထောက်အထားများကိုမိမိကိုယ်ကိုအစီရင်ခံသောအချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ မရပါကပြproblemနာကိုအသုံးပြုခြင်းဟူသောအသုံးအနှုန်းအစား ပို၍ သင့်လျော်သည် (Ross et al ။ , 2012) ။
ဆွေးနွေးရန် FROM မှ
ပြင်းပြင်းထန်ထန် theoryalongside ကြံ့ခိုင် psychometric ဂုဏ်သတ္တိများအပေါ်အခြေခံပြီးပြုလုပ်ထားတဲ့ပြဿနာညစ်ညမ်းစားသုံးမှုစကေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ရည်ရွယ်ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု။ ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအကဲဖြတ်ယခင်အကြေးအလွန်အားကောင်းတဲ့ psychometric ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်သူတို့လက်ခံနိုင်ဖွယ်မော်ဒယ်မထိုက်မတန်ခဲ့ပေမယ့်အချက်များများ၏ content သီအိုရီမေးခွန်းထုတ်စရာ (Grubbs et al, 2015; ။ Kor et al, 2014 ။ ) ။
အဆိုပါဖော်ပြရန်စာရင်းများအရလက်ရှိလေ့လာမှုမှာပျမ်းမျှပါဝင်သူအပတ်စဉ်ညစ်ညမ်း-ဆက်စပ်ဗီဒီယိုများကြည့်ရှုအားပေး, နှင့်သူသို့မဟုတ်သူမတစ်ဦးချင်းစီအခါသမယတွင်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းကြည့်ရှုမိနစ် 16 မှ 30 နေခဲ့ရသည်။ PPCS ရမှတ်များညစ်ညမ်းကြည့်ရှုသုံးစွဲပေမယ့်အတန်အသင့်ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများကြည့်ရှုခြင်း၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်ဆက်စပ်သောအခြိနျမှကိုအားနည်းစွာဆက်စပ်ခဲ့ကြသည်။
သို့သော်လက်ရှိရလဒ်တွေကိုအကြံပြု ကြောင်းပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအသီးအသီးအခါသမယတွင်စေ့စပ်သုံးစွဲအချိန်ကိုထက်ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများကြည့်ရှုခြင်း၏ကြိမ်နှုန်းပိုမိုဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ညစ်ညမ်း၏မကြာခဏအသုံးပြုခြင်းကိုပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုတစ်ခုမရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်းတစ်ဦးတည်းအကြိမ်ရေကဒီဖြစ်စဉ်တစ်ခုကျေနပ်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်စဉ်းစားမရနိုငျ
အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပြဿနာအပြုအမူသူ့ဟာသူ၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်ကြာချိန်အကြားဆက်ဆံရေးအပြုသဘောဆောင်ပေမယ့်မှသာအလယ်အလတ်ဖြစ်သောကြောင့်မကြာမီကသုတေသန (ဥပမာအမှတ်တံဆိပ် et al, 2011 ။ Grubbs et al, 2015; ။ Twohig et al, 2009 ။ ), ဒီအယူအဆအတည်ပြုလိုက်ပါတယ် ။ ထို့ကြောင့်, သာကြာချိန်ဒါမှမဟုတ်ကြိမ်နှုန်းအပေါ်အခြေခံပြီးပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်အဖြစ်ကလူ labeling ။
ထို့အပြင်ထိုညစ်ညမ်းပစ္စည်း၏ပုံစံနှင့် ပတ်သက်. , ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုအားကြည့်ရှု၏ကြိမ်နှုန်းကိုပိုမိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းပုံပြင်များကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်အရှင်သည်ယခင်ရလဒ်များမှာ (ကုန်အမှတ်တံဆိပ် et al ။ , 2011) နဲ့အညီထက် PPCS ရမှတ်များနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည်။ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်း၏ကြိမ်နှုန်းလည်းပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုမှအတန်အသင့်ဆက်စပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီဆက်နွယ်မှု၏ခွန်အား PPCS ရမှတ်များနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနေစဉ်အတွင်းညစ်ညမ်းကြည့်ရှု၏ကြိမ်နှုန်းအကြားအသင်းအဖွဲ့ထက်ပင်ပိုမိုအားကောင်းဖြစ်တို့အားထင်ရှားလေ၏။
ပိုများသောအထူးသ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မြင့်မားသောအဆင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုတစ်ဦးရှေ့ပြေးဖြစ်လိမ့်မယ်, အဲဒါကပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်မကြာခဏတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနှစ်ခုလုံး hypersexuality နှစ်ခုစလုံးအကျိုးဆက်များဖြစ်ကြောင်း။ ယူဆနေသည် ထို့ကြောင့်, ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကလပ်အဝတ်တန်ဆာကိုချွတ်မယ့်, မကြာခဏတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဖို့အလားတူ hypersexuality ၏ထီးအောက်မှာပေါ်လာ, နှင့်ဖုန်းလိင်နှင့်ကျဘာအမျိုးမျိုးပုံစံများ (Kafka, 2010 မြားတှငျပါဝငျခွငျးနိုင်ပါတယ်
ဤရွေ့ကားလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းတစ်ဦးချင်းစီ PPCS အစိတ်အပိုင်းအပေါ်အမြင့်ဆုံးရမှတ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့အားလုံးသုံးအုပ်စုများပဋိပက္ခအစိတ်အပိုင်းအပေါ်အတော်လေးနိမ့်ရမှတ်များရှိခဲ့ကြောင်းသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်။ Arguably, ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု (ထိုကဲ့သို့သောဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်အရက်သောက်အရက်ကဲ့သို့) ပြဿနာအပြုအမူတွေသို့မဟုတ်စှဲ၏အခြားပုံစံများအတိုင်းမြင်နိုင်သည်မဟုတ်။ ထို့ကြောင့်လူ့ပဋိပက္ခများသည်အခြားအလားအလာစွဲလမ်းအပြုအမူတွေ၏အမှု၌ကဲ့သို့ပျံ့နှံ့နေကြသည်မဟုတ်။ မှာ-အန္တရာယ်အုပ်စုတစ်စုကပိုမကြာခဏညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအားပေးစီအခါသမယပေါ်မှာမြားတှငျပါဝငျခွငျးအချိန်ပိုမိုသုံးစွဲဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်းအဆိုပါအနိမ့်အန္တရာယ်မှာ-အန္တရာယ်အုပ်စုများအကြားခြားနားချက်များသာခေတ်ရေစီးကြောင်းခဲ့ကြသည်။
sensitivity နှင့်တိကျသောဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့် PPCS အနာဂတ်လေ့လာမှုများနှင့်အတူပြproblemနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအသုံးပြုမှုကိုဖော်ထုတ်ရန် ၇၆ မှတ်၏အကောင်းဆုံးဖြတ်တောက်မှုကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်အစောပိုင်းရောဂါရှာဖွေရေးညွှန်းကိန်းအဖြစ်အသုံးချတဲ့အခါချိန်ခွင်ကိုအသုံးပြုခြင်းကန့်သတ်ချက်ရှိကြောင်းသတိပြုသင့်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တိကျသောအပြုအမူသည်လူတစ် ဦး တစ်ယောက်အတွက်တိကျသောအပြုအမူအမှန်ဖြစ်ကြောင်းပြသရန်ဆေးခန်းအခြေပြုတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုများမှသာသင့်လျော်သောကြောင့်ဖြစ်သည် (Maraz, Király, & Demetrovics, 76) ။